Senior Sales & Marketing Executive (Refrigeration) Archives - Glory Assumption Space
Senior Sales & Marketing Executive (Refrigeration)
၁) Senior Sales & Marketing Executive (Refrigeration) - Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဘိုတထောင်မြို့နယ် ။
၁) Senior Sales & Marketing Executive (Refrigeration) - Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဘိုတထောင်မြို့နယ် ။ Job Requirement : Education: B.E/B.Tech ( Mechanical/ Electrical) or Any Graduate Requirement: Minimum3years of marketing experience in Refrigeration or ACMV field especially in commercial / Project sales Job Description: - New Market Survey - Conduct presentation to customers, develop proposal/ quotation - Must haveabasic knowledge of design calculation for Refrigeration system. - Determine customer needs and wants , follow- up sales with customers - Report directly to Sales Manager . - Computer proficiency is required ( compulsory), able to use Microsoft Office, Power point, Outlook, AutoCAD and Email. - English language (Minimum intermediate level is required) as able to communicate with foreign customers . GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘိုတထောင်မြို့နယ် တွင်ရှိသော Engineer Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )